Vim: zvikonzero zvekuchida | Linux Vakapindwa muropa
Vim: zvikonzero zvekumuda
Iyo inozivikanwa Vim mupepeti izvo imi mese zvamunoziva zvine vazhinji vanodzivirira uye vamwe vanozvidza. Sezvandinogara ndichitaura, zvese inyaya yekuravira nekunyaradza. Ivo vanonzwa kugadzikana nevamwe vanyori vanyori havazove vanofarira kudzivirira Vim kurwisa yavo yavanofarira mupepeti uye avo vanoona uye vanakirwe nehunhu hweVim vanozozvikoshesa. Zvisinei, sekune nzvimbo dzemadistros nedesktop, pane mhando yehondo pakati pevagadziri ava ...
Vim inomirira Vi Yakabvumidzwa, ishanduro yakavandudzwa ye vi zvinyorwa zvemadhizaini eUNIX masystem. Munyori waro ndiBram Moolenar uye yakaunzwa kekutanga muna 1991, kubvira ipapo chiitiko ichi chakavandudza uye nanhasi ichi chakanakisa chinyorwa chemavara chakaramba chiripo. Sezvandakareva mundima yekutanga, unogona kunge uine mumwe mupepeti waunofarira, muchidimbu mupepeti wangu wandinoda haasi Vim.
Moolenar yakawanikwa Shamwari komputa mukupedzisira 80's uye aida kuramba achishandisa iyo UNIX mupepeti iyo yaakange achishanda nayo kusvika panguva iyoyo, asi matombo anowanikwa evi yeAmiga haana kuifarira. Saka akadzikira kubasa uye muna 1988 akatanga kunyora mupepeti wake wega zvichibva pavi clone inozivikanwa saStevie. Kubva musi iwoyo kusvika parizvino, zvakawanda zvakagadziridzwa, zvichishandurwa kuita imwe yemavara makuru edhita nhasi. Robert Webb akaita graphical mushandisi interface yeVim muna 1996, saka inogona kushandiswa zvakajeka kubvira ipapo.
Uye ikozvino kune izvo zvaiitika muchinyorwa chino, zvakanakira kana zvakanakira Vim kuida ndeiyi:
Zvirongwa zvemavara Zvemavara, izvo zvinogara zvichibatsira pakurongeka kwes syntax kana iwe uchinge waishandisa kuchirongwa.
Iwe haufanire kuisa maoko ako pane iyo keyboard iwe uchishanda nayo, se haidi mbeva.
Gara nhaka yakanakisa ye Vi.
Iyo inonakidza plugins iyo inowedzera mashandiro emupepeti. Ivo vanotokutendera iwe kuti ubatanidze Git kana yako yaunofarira VCS neVim.
Iyo nharaunda iri kumashure kweVim iri kushingaira uye yakagadzirira kupindura mibvunzo yako ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Vim: zvikonzero zvekumuda
akasangana oss akadaro
Ini ndaizowedzera zvimwe zvakanaka kana mabhenefiti ayo anozivikanwa
* Vi / vim kana ayo akasiyana akaiswa nekusarudzika pane akawanda Unix-senge masystem (Linux, * BSD) kana Unix.
* Iyo yakawanda multiplatform (Linux, Mac OS X, Windows).
* Mazhinji emidziyo yanhasi akafemerwa ne vi / vim, semuenzaniso vimperator ye firefox kana vimium yegoogle-chrome, iyo inobatsira kufamba pasina kudikanwa kwegonzo.
* Ipfupi uye iri nyore kurangarira mapfupi ekhibhodi.
* Ita mabasa akaomarara aine mashoma mafambiro.
* Iyo inoshandiswa muhurongwa hwehutongi.
* Simbisa chiyeuchidzo chako, pakati pezvakanaka zvakawanda izvo zvine ...
Zvinotora imwe tsika kuti ugadzikane ne vim, uye nzira yakanakisa yekutanga ndeyekumhanyisa vimtutor mune inouraya, wobva wapedza imwe nguva uchitsetsenura.
Ndiri kufara kuti iwe unotsaurira kupinda kune akadaro anoshamisa mupepeti wenyika * nix sevim.
Pindura kuna met oss
Dehenya rebhuruu akadaro
Iwe unoziva kuti mumwe munhu aifanira kuzvitaura, uye panguva ino yaive nguva yangu ...
Vim inoyamwa!, Emacs rulez !!!!!!!!!
Zvese zvakanaka nezveVim, asi zvakawedzeredzwa ne1000.
Uye zvinotaurwa nemumwe munhu anoshandisa iyo 2.
Asel Madrawn Küsel akadaro
Pindura kuna Asel Madrawn Küsel
Ungachinja sei mabhatani ewindo muElementary OS